Intuthuzelo kunye nezithethe "Casa fiallo" Apartment
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAlexis
I-Casa Fiallo Apartment iyonke, ifulethi labucala, elinomnyango ozimeleyo, owenziwe ngekhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala eliphindwe kabini elinazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze iindwendwe zam zizive zisekhaya, zikhululekile, zikhululekile, kwindawo ecocekileyo neyolisayo. .
Indlu entle yonke, yabucala, enendawo yokungena ezimeleyo, edityaniswe yikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, igumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini. Ngayo yonke into efunekayo
Indawo yonke entle, yabucala, enendawo yokungena ezimeleyo, edityaniswe yikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, igumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini. Ngayo yonke into efunekayo ukwenza iindwendwe zam zizive zisekhaya, zonwabile, zikhululekile, kwindawo entle necocekileyo.
Ukhetho; iindwendwe ezimbini
INDAWO: Kumbindi wembali wesixeko.
Ifumaneka kwiibhloko ezi-2 ukusuka kwi-zócalo yesixeko, indawo efanelekileyo yembali yayo, iziko lokuhlalisana kwe-Oaxacans kunye ne-colonial architecture.
Iibhloko ezi-3 kude yiMacedonio Alcalá Theatre.
Iibhloko ezintandathu kude ungafumana iTempile kunye nendlu yoonongendi yaseSanto Domingo, umzekelo woyilo lweBaroque yaseNew Spain.
Iibhloko ezintathu kude zimbini zeemakethi eziphambili zesixeko, iindawo ezizele luyolo lokupheka, izithako kunye nobugcisa obuyonwabisayo.
Iibhloko ezi-3 kude ungahamba indlela yabakhenkethi, ujonge ulwakhiwo kwaye ufike kwiziko lenkcubeko kunye netempile yaseSanto Domingo.
Kufutshane nesebe unokufumana iimyuziyam ezahlukeneyo, iindawo zokutyela ezahlukeneyo, i-mezcalerías, iibhari, iikhemesti kunye nempahla.
Ifakwe kanye kumbindi wembali weSixeko sase-Oaxaca,
1.- Ibekwe kumgama ombalwa ukusuka “kwi-Zócalo” yesixeko, indawo ebaluleke kakhulu kwimbali yayo. Indawo yokonwabisa abantu basekuhlaleni kunye nezakhiwo zobukoloniyali.
2.- Iibhloko ezintathu kude uya kufumana iMacedonio Alcalá Theatre.
3.- Iibhloko ezintandathu kude ungafumana iTempile kunye ne-abbey yangaphambili yaseSanto Domingo, umzekelo woyilo lwe-baroque yaseNew Spain.
4.- Iibhloko ezintathu kude kukho ezimbini zeemarike eziphambili zemveli esixekweni, iindawo ezizele luyolo lokupheka, iziqholo kunye nokutya okuqhelekileyo, kunye nemisebenzi yezandla efana ne-Alebrijes, iimpahla kunye nezihlangu ezinomdla.
5.- Kufuphi neflethi unokufumana iimyuziyam ezininzi, iindawo zokutyela, i-mezcalerias (iivenkile ze-mezcal) kunye nemivalo.
Ndifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku ukuze ndikubonelele ngendawo yokuhlala engcono.